test automation matipi uye akanakisa maitiro
Kuru Kushandisa Michina Kwayedza Automation Matipi uye Akanakisa Maitiro
Kwayedza Automation Matipi uye Akanakisa Maitiro
Kuzviongorora Kwayedza chiitiko chakakosha chekuyedza panguva yeiyo software yekuvandudza hupenyu nekuti inogona kupa mhinduro nekukurumidza kuchikwata kana ficha nyowani yagadzirwa.
Iyo zvakare inobvisa mutoro kubva kuQA kudzokororazve kumhanyisa bvunzo dzekudzivirira iyo inochengetedza nguva yeQA yekutarisa pane zvimwe zviitiko zvekuyedza.
Kwayedza Automation, kana yaitwa nemazvo, inogona kubatsira zvakanyanya kuchikwata. Iwo matipi pazasi achakubatsira iwe kuti uwane iyo yakanyanya kukosha kubva kune yako otomatiki kuyedza maitiro uye chiitiko uye inosimbisa misungo yekudzivirira kana uchitanga kugadzirisa ako bvunzo.
Manual vs Automated - Kuedza vs Kutarisa
Dzivisa kuenzanisa pakati pemaoko uye otomatiki kuyedza. Ivo vaviri anodiwa sezvo imwe neimwe ichishandira zvakasiyana chinangwa. Automated bvunzo seti yemirairo yakanyorwa nemunhu kuti aite rimwe basa. Nguva dzese bvunzo yekushandura inomhanyisa, inoteedzera nhanho dzakaenzana sekurairwa uye ongo tarisa zvinhu zviri kukumbirwa kutarisa.
Kune rimwe divi, panguva yekuyedza kwemawoko, uropi hwomuedzo hunobatanidzwa uye hunogona kuona kumwe kukundikana muchirongwa. Matanho ekuyedza anogona kunge asiri akafanana nguva dzese, sezvo muyedzo anogona kuchinja kuyerera panguva yekuyedzwa; izvi zvinonyanya kuitika kana paongororwa kuongororwa.
Ongorora Kudzokorodza Miedzo
Chikonzero chikuru iwe chaunoda kugadzirisa muchina bvunzo ndeyekuti iwe unoda kuitisa bvunzo kakawanda pane zvese zvitsva zvinoburitswa. Kana iyo bvunzo ichidikanwa kuti iitwe kamwe chete, saka kuedza kwekugadzirisa bvunzo kunogona kupfuura mabhenefiti.
Kudzokorora bvunzo kunodiwa kuti kuitwe kakawanda sezvo software iri pasi pekuedzwa inochinja. Izvi zvinogona kutora nguva yakawanda uye rinofinha basa reQA yekumhanyisa regression bvunzo zuva rega rega. Kudzokorora bvunzo vakwikwidzi vakanaka veyedzo otomatiki.
Dhizaini Kuyedza Usati Wazvigadzira
Iyo inogara iri tsika yakanaka kugadzira mamakesi ebvunzo uye zviitiko usati watanga kushandura bvunzo. Iyo yakanaka bvunzo dhizaini iyo inogona kubatsira mukuona zvikanganiso, otomatiki bvunzo dzinongoita iyo bvunzo dhizaini.
Njodzi yekusvetuka yakananga kune otomatiki ndeyekuti iwe unongofarira chete kuita kuti script ishande uye kazhinji unongo gadzira yakanaka uye inofara kuyerera zviitiko pane kufunga nezve zvimwe zvinogona kuitika izvo zvinogona kuyedzwa.
Zvakare, usaderedze chiyero chekuyedza kungoita kuti bvunzo dzishande kana kupasa.
Bvisa Kusava nechokwadi kubva kuOutomated Miedzo
Imwe yemapoinzi akakosha ekuyedza otomatiki kugona kupa mhedzisiro kuitira kuti tive nechokwadi chekuti chimwe chinhu chakatadza kana bvunzo rakundikana.
Kana iyo otomatiki bvunzo ikapfuura mune kumhanya kumwe uye ikatadza mune inotevera kumhanya, pasina shanduko pane software iri pasi pekuyedzwa, hatigone kuva nechokwadi kana kukundikana kuri nekuda kwekushandisa kana nekuda kwezvimwe zvinhu, senge bvunzo nharaunda nharaunda kana matambudziko mukati kodhi yekubvunzo pachayo.
Kana paine kukundikana, isu tinofanirwa kuongorora mhedzisiro kuti tione kuti chii chakange chatadza, uye kana tiine mibairo yakawanda isingawirirane kana isiriyo mhedzisiro, inowedzera nguva yekuongorora.
Usatya kubvisa bvunzo dzisina kugadzikana kubva pakurongedza mapakeji; pachinzvimbo, tarisa mhedzisiro yakachena mhedzisiro iwe yaunogona kuvimba nayo.
Wongorora Ongororo Dzakazvimirira dzeUchokwadi
Iwe unozovhundutswa nenhamba huru yemayedzo emuchina akapfuura echinyakare, usangotarisa chero chinhu kana kusiri kuongorora iko kukosha kwakanyanya!
Ichi chingave chiratidzo chekusvetuka wakananga kune otomatiki pasina kushandisa nguva yakakwana usati waronga pane izvo zvinofanirwa kuitwa nekugadzira zviitiko zvakanaka zveyedzo.
Gara uine waunoshanda naye kuti aongorore otomatiki bvunzo dzechokwadi uye hutsanana. Ita shuwa kuti bvunzo dziripo.
Usaite Mashandiro Asina Kugadzikana
Sechinhu chitsva kana mashandiro ari kuvandudzwa, zvinhu zvakawanda zvinogona kukanganisika uye kunyangwe chimiro chingave chisisiri kushanda nekuti bhizinesi rakachinja pfungwa.
Kana iwe ukatanga kuita otomatiki bvunzo sezvo chimiro chaive chiri kugadzirwa, bvunzo dzinofanira kuvandudzwa kakawanda sezvo chinhu chinoshanduka uye chinogona kunge chinotyisa kuedza kufambirana neshanduko dzese. Uye kana icho chikamu chikange chisisashande, zvese izvo kuyedza pane bvunzo otomatiki zvaparadzwa.
Naizvozvo, zvinogara zvakanakisa kuita chinhu kana changove chakadzikama uye chisingachinje.
Usatarisira Mashiripiti Kubva kuTest Automation
Chikonzero chekutanga chekuyedza otomatiki kusunungura nguva yeQA yekuyedza yekuongorora uye yekupa chivimbo kuchikwata kuti iko kunyorera kuchiri mugwara rakanaka shanduko nyowani dzichiunzwa.
Usatarisira otomatiki kuti uwane akawanda mabugs . Muchokwadi, iyo nhamba yemabhugi anowanikwa neotomation anogara ari mashoma kwazvo pane emanyorerwo uye ongororo yekuyedza.
Usatsamire Pazasi paMuchina - Chenjera Kupasa Miedzo
Ongororo dzekuzvidzivirira dzoga dzinogona kupa pfungwa yekuvimba nechikwata nekuti bvunzo dzekudzokororazve dzinofanira kupfuura sezvo kuita kutsva kuchinge kwaunzwa.
Nekudaro, cherekedza kuti haazi ese mabvunzo anoitwa otomatiki kana anogona kuita otomatiki, saka gara uchiperekedza otomatiki bvunzo nekutsvaga kwekuongorora.
Dzimwe nguva shanduko mune software inofanirwa kutadza bvunzo; zvisinei, kana bvunzo dzese dzichipfuura zvinoreva kuti chakakanganikwa chakarasika uye nekuti pakange pasina kufona kuti chiitwe, hurema hwacho hwakaonekwa husingaonekwe.
Chinangwa Chekukurumidza Mhinduro
Mhinduro nekukurumidza ndechimwe chezvinangwa zve automated bvunzo nekuti vanogadzira vane shungu dzekuziva kana izvo zvavakagadzira zvinoshanda uye zvisina kutyora mashandiro azvino.
Kuti uwane iyi yekukurumidza mhinduro loop, bvunzo dzinofanirwa kuve dzinoitwa pachinhu kana API rukoko pasina kuvimba neUI.
Miedzo inomhanya paUI inononoka uye inokanganisa kukanganisa nekuda kweGUI shanduko. Mune mamwe mazwi, mashandiro achiri kushanda sezvanga zvichitarisirwa asi bvunzo dzinokundikana nekuda kweshanduko muUI. Naizvozvo bvunzo dzinogona kuve dzisina kuvimbika.
Nzwisisa zviri mukati
Miedzo inogona kugadziriswa pane chero dura, Yuniti, API, Service, GUI. Nhengo yega yega inoshanda chinangwa chakasiyana chekuyedzwa.
Yuniti Miedzo inoona kuti kodhi inoshanda padanho rekirasi, kuti inounganidza uye pfungwa sezvazvinotarisirwa. Kuyedzwa pane ino dura kunosimbisa kupfuura kusimbiswa.
API Bvunzo kana Kubatanidza Kuedza kunoona seti yemabasa uye makirasi anogona kushanda pamwechete uye data rinogona kupfuudzwa kubva kukirasi imwe kuenda kune imwe.
GUI Miedzo kune rimwe divi bvunzo mushandisi kuyerera uye nzendo. Kazhinji, isu hatinga kuyedze mashandiro kubva kuUI. Izvi zvinofanirwa kuitwa pamatanho epasi.
Chinangwa chikuru cheUI bvunzo ndechekuona kuti iyo system yese inoshanda sekuenderana nezvimwe zvakajairika mushandisi zviitiko uye kushandisa kesi. Kuedzwa pane ino dura kunowedzera Kusimbisa pane Kuongorora
Padanho reUI, isu tinogadzira zviitiko kwete pane nyaya.
Usashandise Bvunzo Dzese
100% Bvunzo Yekuvhara haigoneke nekuti panogona kuve nemamiriyoni emubatanidzwa. Isu tinogara tichiita subset yeinokwanisika bvunzo. Iwo iwo iwo musimboti unoshanda kune otomatiki kuyedza.
Kugadzira otomatiki script, zvinoda nguva uye kushanda nesimba, uye takanangana ne 'Automating Yese Bvunzo', tinoda yakawanda zviwanikwa uye nguva, izvo mune dzakawanda zviitiko zvisingaite.
Panzvimbo iyoyo, shandisa nzira yeRisk-based kuona kuti ndeapi mabvunzo anofanirwa kuitwa otomatiki. Kuti uwane iyo yakakosha kwazvo kubva otomatiki, chete gadzirisa yakakosha kesi bhizinesi zviitiko uye zviitiko.
Zvakare, yakakwira nhamba ye otomatiki bvunzo inowedzera mari yekuchengetedza uye yakaoma kuchengeta.
Chimwe chinyorwa chekucherechedza mupfungwa ndechekuti haisi miedzo yese inogona kugadziriswa. Mimwe miedzo yakaoma kwazvo muchimiro uye inoda yakawanda yekudzika sisitimu yekutarisa uye inogona kunge isingaenderane. Muzviitiko izvi, zvakanakisa kusiya macheki aya kuitira bvunzo.
Shandisa Maedzo Ekuyedza muTest Automation
Maitiro ekuyedza awakadzidza mu ISTQB, haasi ekungoedza zvemanyorerwo. Izvo zvinoshandawo kune otomatiki kuyedza. Matekiniki akadai seBoundary Value Kuongorora, Kuenzana Kuparadzanisa, State Shanduko Kwayedza, Pairwise Kuedzwa kunogona kupa yakawanda mabhenefiti mune otomatiki kuyedzwa.
Kuti uwane zvakanyatso kubva pane yako otomatiki kuyedzwa, yakanaka QA maitiro inofanira kunge iri munzvimbo. Kana iyo QA maitiro iri mhirizhonga uye isu tichiwedzera otomatiki kuyedza kune iyo mhirizhonga, zvese zvatinowana kukurumidza mhirizhonga.
Edza kupindura mibvunzo yakaita, Chii chekushandisa, Nguva yekushandisa , Nguva yekuita bvunzo dzakazvimiririra, Ndiani achashandura bvunzo, Ndeapi maturusi anofanirwa kushandiswa pakuongorora otomatiki, nezvimwe…
Aya matipi anounganidzwa kazhinji kubva muchiitiko seAquationation Tester uye mamwe maitiro akanaka anoteverwa nevamwe.
Iwe une chero Test Automation Matipi ekuti uwedzerwe pane urwu runyorwa?
bhuku remifananidzo kubva parunhare
Akanakisa Motorola mafoni muna 2021
Vanenge miriyoni imwe yeVerizon vatengi vanofanirwa kudzosa ichi chisina kunaka mudziyo usati wabata moto